लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या हैन, हाम्रो पवित्र भूभाग हो : ओली « Mechipost.com
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या हैन, हाम्रो पवित्र भूभाग हो : ओली
प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०७८, मंगलवार १५:१०
फिदिम । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या नभएर नेपालको पवित्र भू–भाग भएको बताएका छन् ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरलाई ुसमस्याु लेखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भूमि फिर्ता सम्बन्धी स्पष्ट कुरा गर्न सुझाव दिए ।
ओलीले भने ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समस्या भन्नुभएको छ । यो समस्या नभएर नेपालको पवित्र भू–भाग हो ।’
उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिम्पियाधुरा कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भनेर किन भन्न नसकेको भन्दै प्रश्‍न गरे । ‘लिम्पियाधुरा कालापानी, लिपुकुल समस्या हो । हाम्रो पवित्र अभिन्न भू–भाग हो, उनले भने,ुयो समस्या हो ? यो समस्या हो भने त छोडिदियो भने त समस्या समाधान होला नी ? हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौं भन्नुपर्छ कि ? यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’
ओलीले आवश्यकता परेमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि मंगलबार पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले अहिले संविधानको सर्वस्वीकार्यता भएको बताएका हुन् ।
उनले थरूहटलगायतसँग सहमति भएको वताए । उनले भने, ‘संविधानको स्वीकार्यता भएको छ । आवश्यकता पर्‍यो भने संविधानको संशोधन पनि गर्नुपर्छ । त्यसलाई संविधानको अस्वीकार्यता भन्न मिल्दैन । सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच संवादहीनताको अवस्था आएको पनि ओलीको आरोप छ । ‘अहिले सत्ता पक्ष उन्मादमा छ । प्रतिपक्षलाई ठेगान लाइदिन्छौं भन्ने देखिएको छ’ ओलीले भने ।